ICC oo Tuurtey Dacwaddii Madaxweynaha Kenya
Maxkamadda Caalamiga ee ICC ayaa wax kama jiraan ka dhigtey dacwaddii dembiyadii xuquuwda aadanaha ka dhanka ahaa ee loo haystey Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
Go’aanka ayaa lagu dhawaaqey maanta oo Jimco ah, laba maalmood kadib markii maxkamadda ay muddo toddobaad ah u qabatey dacwad oogeyaasha inay xoojiyaan dacwaddaasi, horeyna ay u sii wadaan, amaba ay is dhaafaan eedeymaha ka dhanka ah Madaxweyne Kenyatta.
Dacwad Oogaha Mxakamadda ICC Fatou Bensouda ayaa qoraal ay soo saartey waxay ku xustey in iskaashi la’aan dhanka dowladda Kenya ka timid ay saameyn weyn ku yeelatey dacwadda. Waxay kaloo intaa ku dartey inay weli xaq u leedahay inay dib dacwad ugu soo oogto Madaxweyne Kenyatta haddii la helo caddeymio dheeri ah oo ku filan.
Madaxweyne Kenyatta ayaa si degdeg ah jawaab uga bixiyey go’aankaasi maxkamadda, isagoo sheegey inuu haatan dareemayo inaanu wax qalad ah gelin oo dembi uu ka saliim yahay.
Dhanka kale, Steven Kay oo ah qareenka u doodaya madaxweynaha, ayaa saxaafadda u sheegaya in maxkamadda ICC laga doonayo inay raali gelin siiso Mr Kenyatta, maadaama ay ku soo oogeen dacwad iyagoo cuskanaya markhaati been ah.